Fasirka Riyada Geela, Riyada Gabar Ku Riyootay Iyadoo Ilmo Dhashay Iyo Macluumaad Kale. – Filimside.net
Fasirka Riyada Geela, Riyada Gabar Ku Riyootay Iyadoo Ilmo Dhashay Iyo Macluumaad Kale.
Waxaan isku soo aruurinay macluumaad ku saabsan riyooyina dadka ku riyoodaan iyo micnaheeda anagoo kasoo xiganahay dadka riyooyinka turjumaan kuna xeel dheer fasirkeeda halkaan hoose kaga bogo.
1-Hadii haweeney xaas ah ku riyooto ilmo yar iyadoo dhashay taas micnaheeda waa uur ayee yeelan doontaa waana riyo bishaaro ah balse gabar aan wali la guursan iyo wiil aan wali guursan hadee ku riyoodaan iyago ilmo dhaleen nolol murugo inee ku jiraan ayee micnaheeda noqone iyo walaac badan ama musiibo kusoo socoto.
2-Hadaa ku riyooto adigoo gaari wadaayo sido kalena aad ugu faraxsan micnaheedu waa inaad ku faraxsantahay nolosha markaas aad ku jirto balse hadii aadan faraxsaneen riyada dhexdeeda ama adoo bas saaran hadana baska xoog u ordaya adna faraxsaneen dhib badan ayaa kugu soo socdo walal noloshada wax kebedel ama kahortag sameey.
3-Hadaa ku riyooto adoo meel sare kasoo dhacaya walal waxaa ku hayo Il (Cayuun), Jinn ama sixir ee si deg deg ah Qur’aan isku saar waad xanuunsantahay .
4-Hadaa ku riyooto Awr gurigaada soo galaayo (Geel) gurigaadana qof ka xanuunsanaayo qofkaas waqtigiisa ayaa dhamaaday wuuna geeriyoona.
5-Hadii gabadha ku riyooto iyadoo geel dusha ka saaran ama fuushan gabadhaas wey guursaneysa goordhow ama seygeeda/ninkeeda oo mudo ka maqnaa ayaa u imaanaya balse ogow hadii aad ku riyooto iyadoo Awr ku ersanaayo cadow kuu qarsoon ayaa jiro oo aadan dareensanen.
6-Hadaa ku riyooto adoo dhanka Galbeed u tukanaya waxaa tahay qof cilmiga diinta yaqaano balse macaasi iyo dambi kudhex jira had iyo jeer hadaa ku riyooto dhanka Barri u tukanayana waxaa tahay qof Bidco kudhex jira iyo dambiyada waaweyn ee shirkiga ah balse hadaa qiblada adoo u tukanaya ku riyooto waa riyo Khery badan deen laguugu lahaa ayaad bixinee ama safar kheyr badan ayaad galee.
7-Hadaa ku riyooto adoo salaada si saxan u tukuada kitaab qur’aana akhrisanaya weysadana iska saxay taasi micnaheeda waa in aad tahay qof toosan oo dambi dhaaf Alle marwalba weydiista adigo ku dhagan kitaabka Illahay kuna ad –adag marwalba.
F.G: Walaal marwalba ogow in Alle kaliya waxwalbo qarsoon ogyahay (Qayibka) mida kale fasirka riyada dambi ma aha wey banaantahay balse qof si fiican u yaqaano ood ku kalsoontahay inuu riyadaada kuu fasiro u bandhigo.
Dhamaan oraahda sarre waxaan kasoo xigtay qolyaha riyooyinka fasiraan anigoo isku soo aruuriyay waana wax sugan oo la sahmiyay riyo oo dhana waa khiyaas kaliya Wallahu Aclam..
Waxaa Aqrisay 473